SomaliNet Magazine: FEBRAAYO 2002
TAARIIKH - DAGAALKII SOOMAALIYA IYO ITOOBIYA ( 1977—1978)
Afgembigii ka dhacay Soomaaliya Oktoober 1969-kii, waxaa taladii dalka kula wareegey koox saraakiil ah oo ka tirsanaa ciidammadii qalabka sidey ee dalka Soomaaliya. Waxaa saraakiishaas hor kacayey taliyihii milleteriga Soomaaliyeed Jeneraal Maxamad Siyaad Barre. Waxaa xusid mudan in Jeneraal Siyaad,
CAAFIMAADKA - MAXAAD KA TAQAAN CUDURKA KUDKA (ANTHRAX)
Ilaaheenna weyn bay awoodi u sugnaatey oo og waxa inaka qarsoon. Marka laga hadlaayo waxyaabaha ku saabsan caafimaadka, gaar ahaan cudurrada, ayaa culimada aqoonta u lihi waxay dunida u bidhaamiyaan helitaanka iyo daah furka
DHAQANKA- QAYBTII 2AAD
Dumarku waxay ahaayeen dabaqadda ugu xushmadda weyn bulshada Biri ma-geydada ah. Soomaalida reer guuraaga ah waxay lahaayeen dhaqan adag iyo xeer aan laga tallaabsan oo ilaaliya sharafta gabadha reer miyiga ah. Xeerkaasi wuxuu gaarsiisnaa in ninka xaaskiisa u gacan qa
DIINTA - SU’AALIHII UGU YAABKA BADNAA OO LA WAYDIIYAY SHIIKH CABDALLA AL-NUURI IYO JAWAABOHOODII
Waddan kasta oo ka mid ah waddamada Muslimiinta wuxuu leeyahay dad culumo ah oo aad u yaqaan diinta Islaamka. Dadkaas culumada ah bulshada inteeda kale ayaa waydiiya arrin kasta oo diinta la xiriirta. Shiikh Cabadalla Al-Nuuri ayaa ka mid ah Culumada ugu waaweyn oo soo maray wadanka Kuwait . Shii
Qaybtii kowaad waxaan la soconay Faysal iyo Ayaan oo war iska helay, kaddib markii ay dhawr iyo to
CAYAARAHA - BARNAAMIJKA XIDIGAHA
Xubinteena? joogtada ah ee barnaamijka xiddigaha waxaa aynu ku soo qaadanaynaa taariikhdii Ciyaaryahan Axmed Cismaan Geedi oo isagu caan ku ahaa kubbadda cagta Soomaaliyeed looguna naanayso? Geedi?. Ahmed
FANKA IYO SUUGAANTA - QAYBAHA SUUGAANTA SOOMAALIDA
Sida aynu ogsoonnahay ummad walba oo af , dhaqan iyo hiddo wadaag ahi waxay leeyihiin murti iyo sugaaan u gaar ah oo ay higsadaan. Halabuurayaasha
Somaali badan oo ku nool magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ayaa nasiib u yeeshay inay la kulmaan Abwaanka caanka ah Maxamuud Cadullahi Ciise (Sangub) kulankaas waxaa soo qaban qaabiyay Eagal Media Production. Abwaan Sangub wuxuu dadkii meeesha isugu yimid u sheegay arr
SIYAASADA - ALLOW UR U BIXI
Sida umadaha kaleba, dadka Somaaliyeed xagga nolosha waxay soo mareen dhawr marxaladood oo aad u adkaa, m
CAAFIMAADKA - QOFKU XAQ MA U LEEYAHAY INUU IS DILO?
Waayadaan dambe adduunka waxaa ka jiray dood dheer oo ku saabsan sidii laga yeeli lahaa dadka jecel inay iskood isu dilaan ?Suicide?. Waddammo badan oo reer galbeed ah waxaa qofku xaq u leeyahay inuu ?is dilo? haddii uu isagu o go?aansado. Laakiin waxaa dambi ah ama aan sha
CAYAARAHA - FARANSIISKU MA DIFAACAN DOONAA KOOBKA ADDUUNKA?
Tartankii koobka kubbadda cagta ee dunida ayaa lagu wadaa in uu si rasmi ah uga furmo 31-ka May 2002da Magaala Seoul ee caasimadda Kuuriyada koonfureed iyada oo ciyaarta ugu horreysa ay isku haleeli doonaan kooxaha faransiiska oo ah dalka haysta horyaalnimada koob
CAYAARAHA - TODOBAADKA SOOMAALIDA IYO KOOXDA NBA-DA TIMBERWOLVES
Waxaa garoonka kubbadda koleyga? ee Target Center ka dhici doona 31ka March 2002da barnaamij isboorti oo aad u xiiso badan. Barnaamijkaa? isaga ah waxaa ka qayb-qaadanaya dhallinyarada Soomaal
DIINTA - XAJKA - TOBANKA MAALMOOD EE UGU HORREEYA BISHA XAJKA
Maalmahan waxaa ina soo food saarey cibaadadii xajka oo ah tiirka shanaad ee tiirarka islaamka iyada oo ay jiraan dad badan oo sannadkan magaalada Minneapolis ka dhoofa
SIYAASADA - DOOD FURAN: XALKA PUNTLAND XAGGEE KU JIRAA?
Bishii June ee sannadkii 2001, oo ku aaddanayd goortii loo qabtay in maamulkii ku-meel-gaarka ahaa ee Puntland ay muddadu ka dhammaato, dabadeedna doorashooyin lagu soo qaban qaabiyo, iyo wixii ka dambeeyeyba xaaladda Puntlan
GANACSI - SOOMAALIDA QURBAHA
Soomaali aad u fara badan ayaa ku nool gobolka Minnesota, gaar ahaan labada magaalo oo loo yaqaan mataanaha- Minneapolis i
SIYAASADA - ZIMBABWE: AFRIKA IYO DIMUQURAADIYADDA YAA U GARNAQI DOONA?
Marar badan ayaa la is waydiiyaa in dimuquraadiyadu tahay habka ugu fiican oo bini?aadamku isku maamulaan. Qaaradda Africa waxaa ka jira dulmi fara badan, mar kasta oo xukun is baddalo dad badan ayaa la wax yeelleeyaa. Marar badan waxaad arkaysaa waddamo badan oo a
SIYAASADA - SOMALIA IYO DAGAALKA LAGU HAYO “ARGAGAXISIDA”
Sanadkan cusub ayaa waxa uu la kowsaday hadal heyn la hadal hayo Somalia. Quwadaha reer Galbeedka oo uu hogaanka u hayo Mareykanka ayaa waxa ay cadeeyeen in dagaalka lagu hayo ?argagixisida? in aanu ku ekeyn Afghanistan oo qudha ee uu saameyn doono dunida oo idil.
Meelaha la caraba